नेपाल आज | सेवा विस्तार गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल
सेवा विस्तार गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल
काठमाडौं । बिरामीको चाप थेगिनसक्नु भएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ३५ वर्षअघि जापान सरकारले बनाइदिएको अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाका विविध विधाका साथै जटिल शल्यक्रियासमेत हुन्छ । त्यसैले बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको हो । बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले सेवा विस्तार गर्न लागिएको अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल रेकर्ड अफिसर कुमार केसीले जानकारी दिए । अस्पतालमा तीन सय एक शड्ढयाका लागि कायम दरबन्दी सात सय पुग्दासम्म पनि स्थायी दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । यसले पनि बिरामीले प्रभावकारी सेवा पाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालको मुख्य आईसीयू कक्षमा उपचारका लागि बिरामीलाई पालो पाउनै मुस्किल छ । इमर्जेन्सीमा पनि बिरामी संख्या बढ्दा एउटै शड्ढयामा दुईतीन जना बिरामी राखेर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । वार्डमा रहेका शड्ढया प्रायः भरिएको अवस्थामा हुन्छन् । ‘वार्डका बेड शतप्रतिशत भरिएका हुन्छन् । डिस्चार्ज न्यून संख्यामा हुने भएकाले इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका सबैलाई चाहेर पनि वार्डमा भर्ना गर्न नसकिएको हो’, निर्देशक प्रा. डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले भने।
मुख्य आईसीयूमा ११ शड्ढया छन् । मेडिकल आईसीयूमा आठ शड्ढया छन् । ती पनि भरिएकै हुन्छन् । जनरल इमर्जेन्सीसहित अब्जर्भेसनमा ६० शड्ढया छन् । यी पनि बिरामीको संख्या अनुपातमा अपर्याप्त छन् । बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले सेवा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा। खड्गाको भनाइ छ । ‘मुलुकभरिबाट आउने बिरामी अस्पतालले धान्न नसक्ने किसिमको छ । सेवा विस्तारका लागि पनि ठाउँ अभाव छ’, उनले भने ।
अस्पतालमा चुस्त सेवा प्रवाहका लागि सात सय नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक रहेको अस्पतालकी निवर्तमान नर्सिङ निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ पालिखेले बताइन् । तर पाँच सय ६८ जना मात्र नर्सिङ कर्मचारी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार जनरल बेडमा एक नर्सले ६ जना बिरामीलाई सेवा पु¥याउन सक्छन् । तर अस्पतालमा कार्यरत नर्सले २० जना बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।